Cabsi xoogan oo Saakay ka jirto Muqdisho iyo Ciiddamadad AMISOM iyo kuwa Dowladda oo wada Hawlgalo lagu fulinaayo Diyaarado – idalenews.com
Waxaa maanta cabsi badan ay ka jirtaa Magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Somalia gaar ahaan Xaafadda Xamar Jadiid, iyadoona Xaafadaasi xaafadaasi lagu arkayo Diyaarado jawi hoose ku socda oo Hawlgalo baaritaano ah kawada Xaafadaasi.
Diyaaradaha Jawiga hoose ku socda ayaa waxaa lagu soo waramaaya inay saran yihiin Saraakiil iyo Ciiddamo ka kala tirsan AMISOM iyo kuwa Dowladda Somalia, halka wadooyinkana lagu arkayo Ciiddamo dhulka ku socda oo u badan Ciiddamadda sida gaarka ah u tababaran Alpha Groupka.
Hawlgalka ay Ciiddamadaasi ku fulinaayan Diyaaradaha ayaa waxa ay noqoneysaa Hawlgalkii ugu horeeyay oo ay Ciiddamadaasi gudaha Magaaladda Muqdisho uga fulisay Diyaarado.
Dadka ku nool Xaafadda Xamar Jadiid ayaa waxa ay sheegen in Subaxnimadii Saakay ku soo tooseen Guuxa Diyaaradaha iyo Ciiddamo ka tirsan kuwa Dowladda oo si raxan raxan ah u gaaf wareegaayay Wadooyinka Xaafadaasi.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa ay maanta arintaasi cabsi xoogan ku beertay Dadyowga ku nool Magaaladda Muqdisho gaar ahaan Xaafadda Xamar Jadiid oo aan horay looga baran Hawlgalo lagu fulinaayo Diyaarado.
QM oo amaantay Boliska Nigeria ee ka hawlgala Somalia